Raiisul wasaaraha Israel oo lagu eedeeyay inuu ka faa'iideysanayo dababka ka kacay Haifa | shumis.net
Home » News » Raiisul wasaaraha Israel oo lagu eedeeyay inuu ka faa'iideysanayo dababka ka kacay Haifa
Raiisul wasaaraha Israel oo lagu eedeeyay inuu ka faa'iideysanayo dababka ka kacay Haifa
Xildhibaan Falastiin ah oo ka tirsan barlamaanka Knesset ee Israel ayaa ku eedeeyay Benjamin Netanyahu inuu doonaya inuu gaaro "guulaha siyaasadeed isagoo adegsanayo dhacdooyinka nasiib darada ee gobolka ".
Eedeyntan ayaa timid iyadoo looga jawaabayo hadala badan oo kaso yeeray ra'iisul wasaaraha Israel iyo xubno ka mid ah isbahaysiga oo ku eedeeyay Arabta Israa'iil ee laga tirada badan yahay dababka xaaqay qayba badan oo ka mid ah dalkaasi tan iyo Talaadadii.
"Wasiirrada Israeli ayaa kaliya ku eedeeynin dabka inay shideen Falastiin, balse Mr Netanyahu, ra'iisul-wasaaraha, iyo Aryeh Sheykh, wasiirka arrimaha gudaha, ayaa soo jeediyay in ay kala noqoneyso dhalashada qof kasta oo dabka shiday," ayuu yiri Jamal Zahalka, oo xubin ka ah Knesset kana mid ah isbahaysiga axsaabta siyaasadeed ee Falastiiniyiinta Carabta iyo hoggaamiyaha garabka Balad.
"Waxay bartilmaameedsanayaan -Falastiiniyiinta dabcan. ma aysan soo hadal qaadin kuwa gubay qoyska Dawabsheh hal sano ka hor .
" Netanyahu ayaa tilmaamay khamiisti in uu la shaqeyn doono inay degenaanshaha kala noqdaan qofki lagu helo dambi ah "argagixisada", isagoo sheegay in ay dabka ka danbeeyaan "xubno cadaawad weyn u qaba dhinaca Israa'iil".
Waxaa jira 1.7 milyan oo muwaadiniinta Falastiin oo reer Israa'iil ku jira kuwa oo la kulma takoor baahsan iyo xadgudubyo. Netanyahu waxa uu isku dayayaa si uu u helo taageero Israeli isagoo hurinayo colaada ka dhanka ah falastiin iyo Carabta," ayuu yiri Zahalka.
Title: Raiisul wasaaraha Israel oo lagu eedeeyay inuu ka faa'iideysanayo dababka ka kacay Haifa